Niteraka Adihevitra Momba Ny Fanamelohana Ho Faty Tao Singapore Ilay Fanolanana Tao Delhi · Global Voices teny Malagasy
Niteraka Adihevitra Momba Ny Fanamelohana Ho Faty Tao Singapore Ilay Fanolanana Tao Delhi
Voadika ny 12 Janoary 2013 7:48 GMT
Nentina tany Singapore hotsaboina ilay tanora niharan'ny fanolanana faobe tao Delhi, India saingy indrisy fa namoy ny ainy izy tamin'ny 28 Desambra. Naneho ny alahelony sy ny hatezerany ireo Singaporeana marobe manoloana ny fahafatesan'ity niharan'ny fanolanana ity izay fantatr'izao tontolo izao amin'ny anarana hoe Amanat. Niteraka adihevitra mafana momba ny fitovian'ny lahy sy ny vavy, ny herisetra mihatra amin'ny vehivavy sy ny fampiharana ny sazy fanamelohana ho faty amin'ny tranga fanolanana ny fahafatesana mampalahelo nahazo an'i Amanat tao amin'ny hopitalin'i Singapore.
Manohana ny fanamelohana ho faty amin'ireo heloka bevava tafahoatra tahaka ny fanolanana ny Where Bears Roam Free :
Ho an'ireo mpanohitra ny fanamelohana ho faty izay mihevitra fa masiaka loatra aho, vonona hanome alalana ireo mpanolana sahisahy hirenireny ka hanolana (na mety hamono mihitsy) vehivavy maro hafa indray ve ianareo? Raha izany, tsarovy fa mety ny iray amin'ireo olona maminao no hiharan'ny fanolanana manaraka. Ny reninareo. Ny anabavinareo. Ny vadinareo. Ny zanakareo vavy. Ary raha vehivavy ianao, ahoana ny aminao?
“Ampianaro ny Fiarahamonina Aza Manolana.” SAry tao amin'ny Flickrn'i tamara.craiu
Saingy Rachel Zeng kosa nihevitra fa tsy vahaolana ny fanamelohana ho faty:
Miteraka tahotra fotsiny ny sazy fanamelohana ho faty ary tsy fomba mahomby hiadiana amin'ny heloka bevava ny fampitahorana. Tokony ho fantatry ny fiarahamonina hoe nahoana izy ireo no tsy tokony hanolana olombelona hafa amin'ny alalan'ny herisetra sy ny heloka ara-nofo, fa tsy ny tahotry ny sazy izay mandalo sy tsy hanampy mihitsy amin'ny fanatsarana ny fiainam-behivavy eo amin'ny fiarahamonina no hamahana ny olana.
Oddznns mampatsiahy antsika mba hijery anatiny hamongorana ny fankahalàna eo anivon'ny fiarahamonina
…hanohy hamono olona isika mandra-pianatsika ny hatezerana ao anatin'ny fontsika ho tebiteby dia avy eo ho amin'ny fiantrana. Mandra-pahitantsika fa tahaka antsika ihany ny “hafa” ary raha manimba olon-kafa isika, dia misy maty ihany koa ao anatintsika.
Andro vitsy taorian'ny nahafatesan'i Amanat tao Singapore, nikarakara hetsika fandrehetana labozia tao amin'ny Kianja Hong Lim i Shrusti Tripathy sy Vanessa mba hitsangana hanohitra ny fanolanana sy hampiroborobo ny fanentanana ny amin'ny tokony hiadiana ny herisetra mianjady amin'ny vehivavy. Olona maherin'ny 200 no tonga nanatrika ny hetsika.
Mandrisika ny olona izahay mba hitsangana ary hiaraka aminay hanome voninahitra ny lasibatra sy ny fianakaviany, ary hanaitaitra manoloana ireo loza mahatsiravina mandrakotra ny fiarahamonintsika ary indrindra indrindra, fantaro ity; zavatra iray ihany no tsapan'ny niharam-boina raha tsy jerena ny fivatravatran'ny herisetra, na 6 ireo mpanolana na 1. Mitovy ihany ny fanimbazimbana ny fihetseham-pony, ny fanontaniana maro ao anaty ary ny tahotra ho an'ny niharam-boina .
‘Mitsangana aho hanohitra ny kolontsain'ny fanolanana’
Nampahafantatra ny vahoaka ireo mpikarakara fa tokony hanao ezaka be i Singapore hampiroborobo ny fampianarana momba ny ‘kolontsain'ny fanolanana’ ao amin'ny fiarahamonina:
Te hampita hafatra ihany koa izahay fa tsy fotoana fahatsiarovana hifampiarahabana ho an'i Singapore izao. Mitranga eto ihany koa ny fanolanana sy ny herisetra ara-nofo, ary maro ireo milaza fa ambony dia ambony ny tahan'ny fanolanana teto Singapore noho ny tany India. Ankoatra izany, tsy mahafa-po ny lalàna momba ny fanolànana eto amintsika .
Miantso izahay mba hisian'ny fanabeazana mahomby kokoa mikasika ny fanolànana sy ny kolontsain'ny fanolànana. Miantso mba hisian'ny fanentanana hampitsaharana ny fanomezan-tsiny ny niharam-boina izahay sy ny fampianarana izay mampianatra hoe “AZA MANOLANA”. Miantso izahay mba hitodika any amin'ny iharan'ny fanolanana ny fitsarana. Miantso ny tokony hanentanana ireo polisy, mpiasan'ny hopitaly, ireo mpanolo-tsaina ary ireo mpiasa sosialy. Miantso izahay ny hanekena fa [misy ireo] karazana fanolànana. Miantso ny hisian'ny rariny ho an'ireo niharam-boina izahay: tokony hofaizina mafy dia mafy, homenarina ireo mpanolana ary hahitsy sy hampianarina.
Nanamarika i Sudhir Thomas Vadaketh fa olana lehibe ny tsy fitovian'ny lahy sy ny vavy ao Singapore
…Na dia nahitana ezaka lehibe teo amin'ny fitovian'ny lahy sy ny vavy aza tao Singapore nandritra ny taona maro, mbola lavitr'ezaka ny lalana hodiavina.
…Raha fanolanana no resahina—lohahevitra lehibe indrindra amin'ny adihevitra momba an'i Amanat—mbola hoe ela vao ho modelin'ny hatsaram-panahy i Singapore. Toa fihatsaram-belatsihy ho an'i Singapore ny hampifaly ny tenany ankehitriny, raha volana vitsy lasa izay, lehilahy 50 eo no eo, anisan'izany ireo mpandraharaha malaza sy lehibenà fikambanana, no voampanga tamina resaka fanolànana mpivaro-tena tsy ampy taona.
Ho am-pontsika foana i Amanat. Tokony hampatsiahy izao tontolo izao ny lova navelany fa n'aiza n'aiza isika, na iza na iza isika, tokony hanohy ny tolona ho amin'ny fitovian'ny lahy sy ny vavy eo anivon'ny fiarahamontsika manokana. Ny firenena tsirairay avy, anisan'izany i Singapore, dia manana fanamby tokony hotratrarina.
Tamin'ny volana lasa, nokarakaraina tao Singapore ihany koa ny famoriam-bahoaka Slutwalk mba hanasongadinana ny olana mianjady amin'ny vehivavy, indrindra ny herisetra lavareny mihatra amin'ny vehivavy eo amin'ny fiarahamonina.